Baarlamaanka Hir-shabeelle oo ceyriyay madaxweynihii maamulkaas - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaBaarlamaanka Hir-shabeelle oo ceyriyay madaxweynihii maamulkaas
August 14, 2017 Puntland Mirror Somalia 0
Madaxweynaha kalsoonida lagala noqday Cali Cabdullaahi Cosoble. [Sawirka: Archive]
Jowhar-(Puntland Mirror) Baarlamaanka maamulka Hir-shabeelle ayaa ceyriyay madaxweynihii maamulkaas Cali Cabdullaahi Cosoble kadib markii ay kalsoonidii kala noqdeen maanta oo Isniin ah.
Ku dhawaad 70 xildhibaanada Hir-shabeelle ayaa u codeeyay in kalsoonida lagala noqdo Cosoble kulan ay ku yeesheen gudaha magaalada Jowhar, iyaga oo ku eedeeyay waxqabad xumo mudadii uu xafiiska joogay.
Tilaabadaan ayaa timid hal maalin kadib markii ilaa 13 wasiir oo Hir-shabeelle katirsan ay iscasileen.
Bishii Oktoobar sanadkii 2016, ayaa Cosoble loo doortay madaxweynihii ugu horeeyay maamulkaas oo fadhigiisu yahay Jowhar.
September 6, 2017 Wadahadalada nabada Mudug ee u dhaxeeya Puntland iyo Galmudug oo ka furmay magaalada Gaalkacyo
Wasiirka Gaashaandhiga dowladda federaalka Soomaaliya oo xilkii iska casilay si uu ugu tartamo guddoomiyaha baarlamaanka
Muqdisho-(Puntland Mirror) Wasiirka Gaashaandhiga dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta oo Talaado ah xilkii iska casilay. Maxamed Mursal Shiikh ayaa warbaahinta u sheegay in xilkii wasiirnimada iska casilay si uu ugu tartamo guddoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka [...]